Ezekieri 46 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mipiro yaifanira kupiwa pazviitiko zvakasiyana-siyana (1-15)
Kupiwa nhaka inobva pazvinhu zvejinda (16-18)
Nzvimbo yekubikira mipiro (19-24)
46 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Gedhi rechivanze chemukati rakatarisa kumabvazuva+ rinofanira kuramba rakavharwa+ kwemazuva 6 ekushanda,+ asi rinofanira kuvhurwa pazuva reSabata uye pazuva rekugara kwemwedzi. 2 Jinda racho richapinda nepavharanda regedhi racho richibva kunze,+ uye richamira pedyo negwatidziro* regedhi racho. Vapristi vachapa chibayiro charo chinopiswa nezvibayiro zvaro zverugare, uye richakotama pachidimbati* chegedhi racho, robva rabuda. Asi gedhi racho harifaniri kuvharwa kusvikira manheru. 3 Vanhu vemunyika yacho vachakotamawo pamberi paJehovha pasuo regedhi iroro, pamaSabata nepakugara kwemwedzi.+ 4 “‘Chibayiro chinopiswa chejinda racho charichaunza kuna Jehovha pazuva reSabata chinofanira kuva makwayana makono 6 akanaka negondohwe rakanaka.+ 5 Mupiro wezviyo* uchapiwa nejinda racho uchava efa* pagondohwe, uye pamakwayana makono richapa chero zvarinogona, uyewo hini* yemafuta paefa imwe neimwe.+ 6 Pazuva rekugara kwemwedzi mupiro warichapa unofanira kuva mukono mudiki wemombe wakanaka, uye makwayana makono 6 negondohwe. Zvipfuwo zvacho zvinofanira kunge zvakanaka.+ 7 Mupiro waro wezviyo unofanira kuva efa pamukono wemombe mudiki, neefa pagondohwe, uye pamakwayana makono rinofanira kupa chero zvarinogona. Uye rinofanira kupa hini yemafuta paefa imwe neimwe. 8 “‘Jinda racho parinopinda, rinofanira kupinda nepavharanda regedhi, uye rinofanira kubuda neipapo.+ 9 Vanhu vemunyika yacho pavanouya pamberi paJehovha panguva yemitambo,+ vaya vanopinda negedhi rekuchamhembe+ vachiuya kuzonamata vanofanira kubuda negedhi rekumaodzanyemba,+ uye vaya vanopinda negedhi rekumaodzanyemba vanofanira kubuda negedhi rekuchamhembe. Hapana anofanira kudzokera nekugedhi raapinda naro, nekuti vanofanira kubuda nepagedhi rakatarisana neravapinda naro. 10 Jinda riri munyika yavo rinofanira kupindawo pavanopinda, uye rinofanira kubudawo pavanobuda. 11 Pamitambo nepamwaka yemitambo, mupiro waro wezviyo unofanira kuva efa pamukono wemombe mudiki, efa pagondohwe, uye pamakwayana makono rinofanira kupa chero zvarinokwanisa, pamwe chete nehini yemafuta paefa imwe neimwe.+ 12 “‘Kana jinda racho rikaunza chibayiro chinopiswa+ kana zvibayiro zverugare kuti zvive mipiro yekungopawo Jehovha richizvidira, richavhurirwa gedhi rakatarisa kumabvazuva, uye richapinda nechibayiro charo chinopiswa, nezvibayiro zvaro zverugare sezvarinoita pazuva reSabata.+ Kana jinda racho rabuda, gedhi racho rinofanira kuvharwa.+ 13 “‘Zuva nezuva unofanira kuuya negwayana gono risati rapfuura gore rimwe chete kuti rive chibayiro chinopiswa kuna Jehovha.+ Unofanira kuita izvi mangwanani ega ega. 14 Paunopa gwayana racho mangwanani ega ega, unofanirawo kupa chikamu chimwe chete pazvikamu 6 zveefa kuti chive mupiro wezviyo, pamwe chete nechikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvehini yemafuta chekusasa pafurawa yakatsetseka kuti uve mupiro wezviyo unogara uchipiwa kuna Jehovha. Murau uyu uchagara uripo. 15 Mangwanani ega ega, vanofanira kupa gwayana gono nemupiro wezviyo nemafuta kuti zvive chibayiro chinopiswa chinogara chichipiwa.’ 16 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Kana jinda rikapa mwanakomana waro mumwe nemumwe chipo kuti chive nhaka yake, ichava pfuma yavo. Ndiyo nhaka yavo. 17 Asi kana rikapa mumwe wevashandi varo chipo chinobva panhaka yaro, chichava chake kusvika gore rekusunungurwa rasvika;+ uye chichabva chadzorerwa kujinda racho. Vanakomana varo chete ndivo vacharamba vaine nhaka yavo. 18 Jinda harifaniri kutorera vanhu nhaka richivamanikidza kubva munzvimbo dzavo. Rinofanira kupa vanakomana varo nhaka richitora panzvimbo yaro, kuti pasava nemunhu wangu anobviswa panzvimbo yake.’” 19 Akabva andipinza nepanzvimbo yaiva pedyo negedhi,+ yekupinda nayo uchienda kudzimba tsvene dzevapristi dzekudyira, dzakanga dzakatarisa kuchamhembe,+ uye ndakaona nzvimbo yaiva kuseri, nechekumavirira. 20 Akati kwandiri: “Iyi ndiyo nzvimbo ichashandiswa nevapristi kubikira chibayiro chemhosva nechibayiro chechivi, uye yavachabikira mupiro wezviyo,+ kuti pasava nechavanotakura vachibuda nacho kuchivanze chekunze, chingazoita kuti vanhu vave vatsvene.”+ 21 Akaenda neni kuchivanze chekunze, akapfuura neni nepamakona mana echivanze chacho, uye ndakaona chivanze pakona imwe neimwe yechivanze chekunze. 22 Pamakona mana echivanze chacho paiva nezvivanze zvidiki zvakanga zvakareba makubhiti* 40, zvakafara makubhiti 30. Zvese zviri zvina zvakanga zvakaenzana.* 23 Mukati mazvo maiva nemadziro madiki kumativi ese, uye muzasi memadziro acho makanga makavakwa zvoto zvekubikira mipiro. 24 Akabva ati kwandiri: “Idzi ndidzo dzimba dzinoshandiswa nevashumiri vepatemberi pakubika zvibayiro zvinounzwa nevanhu.”+
^ Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.
^ Apa pari kureva makubhiti marefu. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “Zvese zviri zvina nezvivakwa zvazvo zvepamakona zvakanga zvakaenzana.”